'Ipaki yeJurassic' Reeboks yiza ipakishwe kwiCryo Barbasol Can - iHorror
Ikhaya	Izinto ezipholileyo zokuthenga	'Ipaki yeJurassic' Reeboks yiza ipakishwe eCryo Barbasol Can
'Ipaki yeJurassic' Reeboks yiza ipakishwe eCryo Barbasol Can
by UTrey Hilburn III Julayi 19, 2021
by UTrey Hilburn III Julayi 19, 2021 2,976 imbono
Akukho mntu ukhathalayo ukuba uGqirha Lewis Dodgson wayedibana noDennis Nedry, ngaphandle kukaGqirha Lewis Dodgson. Nangona kunjalo, sonke sasikhathalele ngeyona nto ipholileyo kaDodgson, 007 ejonga indawo yokugcina iBarbasol cryo kwiDino yeDino. Ewe siyazi, uNedry wawusongela umsebenzi wokuthubelezisa abo batyayo kwesi siqithi, kodwa ayitshintshi into yokuba abalandeli babethwa ngonaphakade ngezo cryo, iinkonkxa zeBarbasol. Kwaye, kujongeka ngathi uReebok unokubethwa naye.
Okona kumva umbono okumGangatho Park Ubambiswano lwe-X Reebok lupholile kakhulu. Kukwabaluleke kakhulu ukuba, ngelixa bendilindele ukuba le promo yenzelwe uyilo olunye lwezihlangu, eneneni, sifumana uyilo oluncinci ngalunye olunemibala kunye nokulingana.
Eyona nto inomtsalane ngentsebenziswano iphela iya kuba yipakethi yam. Izicathulo ze-Omni Zone II ziza zifakwe kwi-super rad, i-jumbo size Barbasol can. Okugqwesileyo konke, kujongeka ngathi kugutyungelwe ludaka, oko kuthetha ukuba oku kupakishwa kuya kubonisa ukuba uNedry uphumelele ngokwenene ekusebenziseni kwakhe ngokungekho semthethweni. Wink, qwina.
Yonke ingqokelela yeReebok inezinto ezininzi-izihlangu, kunye neehempe ezithile kunye nevesti ekhangeleka ipholile ngokwenene. UReebok ulahla zonke ezi zinto zilungileyo ngoJulayi 30, nge-9 kusasa kwi-CDT. Ungajongisa apha Ukujonga zonke uyilo olupholileyo… kwaye loo vesti… loo vesti imnandi, nencasa.